magemveli, Siem Reap
Ukuba udibanisa eli phepha, kusenokwenzeka ukuba lide kakhulu.
Ngaphambi kokuthenga iimpawu zamatye okanye ubucwebe e-Siem Reap, kubalulekile ukufunda ulwazi olungezantsi.
I-Siem Reap ngenye yeendawo kwihlabathi apho kukho iindawo zamatye amaninzi.
Njengazo naziphi na indawo zokuvakasha, phantse yonke into iyinyumba. Kukho inani elikhulu lemali eliza kubakhenkethi ngemveliso yokukhohlisa, ukwazi kakuhle ukuba abakhenkethi abayi kubuya bekhalaza, xa bebuyele ezweni labo.
I-scam yobuqhetseba ixabisa ngamashumi amawaka eedola ngosuku kwixesha eliphantsi lokukhenketho, kunye namawaka angamakhulu amawaka ngemali ngelixa eliphakamileyo, ukususela ngoNovemba ukuya kuMatshi.
Le yindlela efanelekileyo yokubamba imali kubakhenkethi, ngaphandle kobundlobongela kunye nokumomotheka.
Ukuba unethamsanqa, abantu abayi kuzama ukukopela, kodwa phantse bonke abantu obacelayo ngcebiso bayingxenye yale mafia enkulu. Ngoko musa ukuthembela nabani na: isikhokelo sohambo, i-hotel receptionist, umqhubi webhasi, umqhubi wetekisi ...
Nsuku zonke sibona abantu beza kwiziko lezemvelo, abaqaphela ukuba banqunyulwe. Baza ukuvavanya amatshe abo amatye kwi-laboratory emva kokufumana idilesi yethu kwiGoogle, kodwa sele sele iphuzile. Ukususela kumzuzwana umthengi eshiya ivenkile, iphelile. Akukho mbuyiselo.
Asinakubala ukuba zihlandlo ngapha nini sibona abesifazana bekhala xa beqonda ukuba bachithe amakhulu okanye amawaka eedola ngamatye angcolileyo kunye neendye
Enyanisweni, kukho iindawo ezininzi zeentengiso zamatye e-fake, ezabelana ngeenzuzo kunye nabo bonke abaphakathi, i-hotel receptionist, umqhubi, isikhokelo, njl.
Kulula kakhulu ukuxelela abavakhenkethi nantoni na ngenxa yokuba abayiqondi ulwimi lwendawo, kwaye batyatshiswe kukumotheka kunye nobubele babo abahlobo abatsha.
Ukuba ucela umlamli ukuba aqhagamshelane nathi ukubhuka, nantsi imimiselo yento abaya kuphendula ngayo: (ezi zizingqinisiso ezivela kubathengi bethu)
- "Ndazama ukubiza ngefowuni, kodwa le venkile ivaliwe"
Enyanisweni, kulungile! Sivulekile unyaka wonke. Iintsuku ze-7 ngeveki, i-9 i-10 ntambama
- "Le venkile ithengisa iimpawu zamanga, kodwa ndinomhlobo onesitolo, ndiyamazi ngeminyaka eyi-20, unokumthemba. "U
Enyanisweni, kulungile! Sithengisa iimpawu zendalo, kwaye thina kuphela!
- "Kude kakhulu nehotele yakho, kukhona bhetele kwaye kuncinci kude"
Enyanisweni, kulungile! Sifumaneka ngaphaya kwe-Siem Reap
- "Le venkile ayisekho, ivalwe, kodwa ndiyazi ivenkile enhle, ukuba ufuna, ndiya kukuqhubela khona"
Bangakwazi ukuya kude kakhulu ekuxoxeni nasekukhohliseni. Bangakugcina ulinde iintsuku, de kube udibanise kwaye uvumele ukuya kwelinye ivenkile ngomzuzu wokugqibela, ngaphambi kokuba uhambe. Nako usiya ! Ekugqibeleni ususwe!
Yingakho kubalulekile ukuzibhukuda ngokwakho. Ngaloo ndlela, uya kuba 100% ekhuselekile. Sinika ukuthuthwa kwamahhala kwihotele yakho. (Uhambo oluphelele)
Unganqikazi ukuqhagamshelana nathi. Akukho mntu unokukwenza okungcono kunakho. Sithetha isiNgesi, isiFrentshi, khmer ...
- Ifowuni ye-ofisi: + 855 63 968 298
- Ifowuni yefowuni / WhatsApp / Line / WeChat: + 855 92 615 288
- Imeyili: info@gem.agency (siphendula ngexesha elifutshane kakhulu)
Ukuba usaphila ukuthenga isitye esivela kwelinye ivenkile kuba uqinisekile ukuba uyigugu lenene, uze ucele isatifiketi. Ukukwazi ukuba isatifikethi sokwenene kufuneka senziwe ngumdlali wezigulane ezithweswa iziqu, kwi-laboratory yezemvelo. Nasiphi na isatifiketi siyiyo
Ukuba ivenkile e-Siem Reap ikuxelela ukuba sinobambiswano kunye, kulungile. Asinabalingani. Oku kungenxa yokuba le venkile inesitifiketi esisodwa okanye ezimbini esikhishwe yibhubhoratri yethu esho ukuba amawaka amanye amatshe ayigugu athengiswa kule venkile ayinyani. Ngokuchanekileyo ukulungelelanisa ezinye iimpawu zamatye abonisa zona izatifikethi zethu. Ukuba ezinye iimpawu zamagqabini zinyani, ziyakuthi ziqinisekiswe enye.
Ayikho ivenkile yelitye elisetyenziswe kwi-TripAdvisor kwi-"Intengiso" kwi-Siem Reap ngaphandle kweyethu. Zibuze umbuzo: kutheni? Ukuze ufumane impendulo, konke okufuneka ukwenze kukuqonda ukuba zonke izitolo zetekisi ziceliwe IngcebisoEzintathu ukususa iphepha labo kuba bafumene kuphela izikhalazo malunga nobuqhetseba.
Yazi ukuba asizami ukulimaza abathengisi beempawu zamatye. Akunabo bonke abangathembekiyo, abanye bacinga ngokunyanisekileyo ngokuthengisa ii-maritime zangempela, bengayazi ukuba loo matshe ayigugu okanye athathwe. Kodwa ekugqibeleni, umphumo uyafana kumthengi
Ngoku iyafumaneka: amatye ngokuphangaleleyo
Malunga Post Umbhali
Baphuon Auction Bangkok Bangkok Gems and Jewellery Fair Biggest Diamond Blue Diamond Iimayini zegolide Iimayini zegolide Gems iigatye ezivela esibhakabhakeni amatye wholesale giant Diamond Isikhokelo Jayesh Patel Jewellery wobuyiselo Ruby magemveli ukuvula diamond epinki amaxabiso Royal Opal ilitye elinqabileyo elibomvu siskemu Siem Reap Somadevi idayimani zokwenziwa Neempahla ezininzi ezintle phezulu sase ukhenketho Pink iyodwa World Record
Umbala utshintsho: https://t.co/fH8k49fB5Y ngokusebenzisa @YouTube iintsuku 7 eyadlulayo
Tourmaline: https://t.co/1yuZ9odgHY ngokusebenzisa @YouTube iintsuku 12 eyadlulayo
Hiddenite: https://t.co/93iarwtYsd ngokusebenzisa @YouTube iintsuku 16 eyadlulayo
Spodumene: https://t.co/ZzQIeVAxpx ngokusebenzisa @YouTube iintsuku 16 eyadlulayo